Xog: Booliska oo Diyaariyay Sharci Cabaqad ku ah qof kasta oo la soo xiro | XOG-DOON NEWS - Breaking News From Somalia
Home Ciyaaraha Xog: Booliska oo Diyaariyay Sharci Cabaqad ku ah qof kasta oo la...
Taliska qaybta Booliiska Soomaaliya ee gobalka Banaadir ayaa wada diyaarinta Sharci cusub oo isbadal loogu sameynayo qodob kamid ah Sharuucda cadeyneysa Xuquuqda muwaadinka islamarkaana saameyn ku leh shaqada Booliska.
Saraakiil ka tirsan Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in Taliska Booliiska Gobalka ay soo gudbiyeen in la dhareeyo waqtiga ay Maxkamad la’aan xabsi ku heyn karaan dadka la soo qabto oo soo gala gacanta Ciidamada Booliiska ka hor inta aan la saarin Maxkamad.
Dalabka Ciidamada Booliiska ayaa ah in 48 saac aysan ku filneyn oo ay u baahan yihiin in la siiyo ugu yaraan 90 cesho si baaritaan dheer loogu sameeyo qofkii laga shakiyo kadibna la horgeeyo Maxkamad, wixii markaas ka dambeeyana go’aan Maxkamad lagu sii daayo ama lagu sii haayo.
Dadka aan la hadalnay ayaa noo sheegay in Sharcigaan loo gudbin doono Golaha Wasiirada markii uu ka soo dhamaado Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaliya Xasan Cali Kheyre.
Dastuurka dalka iyo xeerarka kale ee dalka u yaalo ayaa tilmaamaya in qofka muwdaanka ah aan Xabsi lagu sii heyn karin muddo ka badan 48 saac, iyadoo aan ku dhicin Xukun Maxkamadeed.
Arintaan ayaa Taliska Booliiska Gobalka Banaadir waxay u arkaan in ay aad u yartahay islamarkaana aysan qof uga dhamaan karin muddo 48 saac oo ay u baahan yihiin waqti ku filan oo ay baaritaan ku sameeyaan.
Haddii ay arintaan dhacdo waxay noqon doontaa dhibaato daran oo ay wajahaan Shacabka Soomaaliyeed madaama ay noqonayso in go’aanka loo gacan geliyay Booliiska garsoorkiina meesha laga saaray.
Sidoo kale arintaan ayaa waxay noqoneysaa in hoos loo dhigay adeegga Garsoorka isamarkaana la baneestay ku xadgudubka Xuquuqda Muwaadinka Soomaaliyeed.
Lama oga go’aanka uu ka qaadan doono Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Kheyre iyo Xubnaha Golaha Wasiirada. Sidoo kale lama oga go’aanka ay ka qaadan doonaan Baarlamaanka dalka hadii sharcigaan la horgeeyo.
Previous articleDEG DEG: Magaca qofka isqarxiyay oo la shaaciyay, Yariisow oo Qadar loola cararay & Xogta Sirdoonka Somalia.
Next articleKasbada DF iyo fadeexadda Puntland